heinlynn on Mon Dec 27, 2010 9:06 pm
ကျွန်တော်ကတော့ အသစ်ကလေး ပါ..
ဘာမှ မသိလို့.. နဲနဲ တော့ သင်ပြပေးကျ ပါအုန်း..
နာမည်က တော့ ဟိဏ်းလင်း လို့ ခေါ်ကျပါတယ်.. ခင်သူတွေကို တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခု အမြဲ ဂျီကျတတ်ပါတယ်..
Re: I'm new user , pls learn to me..
sarkaboulhtoo on Wed Dec 29, 2010 7:34 am
heinlynn wrote: ကျွန်တော်ကတော့ အသစ်ကလေး ပါ..
မင်္ဂလာ ပါ ကိုဟိန်းလင်း
ဟားဟား ကိုဟိန်းလင်း က နောက်တယ်ဗျို့ .. ကိုဟိန်း က ဘားမှမသိရင် ..ကျွန်တော်တော့ သွား ပြီ ဗျို့
ကျွန်တော် ကတော့ အားလုံးဆီက သင်ယူရမှာဗျို့
ဒီဖိုရမ် မှာ ပျော် ရွင် နိုင်ပါစေ။
လေးစားစွာ ဖြင့် sarkaboulhtoo
mintun on Tue Jan 04, 2011 4:57 pm
Ko heinlynn & Ko sarkaboulhtoo,u two tell the beginners of this field.As for me,How i tell my level.So,please change your level as expert.At this time,i'm tell my level as beginner.
I'm now start learn in MM typing.So,next time post in mm.
Yan Naing on Tue Jan 04, 2011 6:16 pm
အသာလုပ်ပါဆရာတို့ရယ် ရန်နိူင် အတွက်လဲ ချန်ကြပါဦးဗျာ ။ ကျွန်တော်ကလဲ အသစ်ကလေးပါ စလောင်းနဲ့ဝေးနေတာ နှစ်ချီနေပြီ ၊ ကျွန်တော့်ကိုလဲ ပစ်မထားကြပါနဲဗျာ ၊ ပြန်သင်ပေးကြပါဦး .... ( စတာနော် ညီအစ်ကိုတွေလိုသဘောထားလို့ပါ တော်ကြာ တမျိူးထင်နေကြမှာစိုးလို့ပါ ၊ စလောင်းနဲ့ဝေးတာကတော့ တကယ်ပါဗျာ ၀တ်မှုံနဲ့တောင်ဝေးနေတာကြာပါပြီ ၊ အဟီး )
Nice to meet u all here .